Nhau dzeBhaibheri: Modhekai naEstere - Kero Yepamutemo yeIndaneti yeZvapupu zvaJehovha
Ngatidzokerei shure makore mashoma Ezra asati aenda Jerusarema. Mordhekai naEstere ndivo vaIsraeri vanoisvokosha muumambo hwePersia. Estere ndimambokadzi, hanzvadzi yake Mordhekai inotevedzera bedzi mambo musimba. Ngationei kuti kwakaitika sei.
Vabereki vaEstere vakafa paaiveri muduku kwazvo, nokudaro Mordhekai akamurera. Ahashivheroshi, mambo wePersia, anemba yake youmambo muguta reShushani, uye Mordhekai ndimumwe wavabatiri vake. Eya, rimwe zuva mudzimai wamambo Vashti haamutereri, saka mambo anosarudza mudzimai mutsva kuva mambokadzi wake. Unoziva mukadzi waanosarudza here? Hungu, Estere muduku akaisvonaka.
Unoona uyu murume anozvikudza anokotamirwa navanhu here? NdiHamani. Murume anoisvokosha muPersia. Hamani anoda kuti Mordhekai, waungaona agere pano, amukotamirewo. Asi Mordhekai haangakuiti. Haafungi kuti kwakarurama kukotamira munhu akaipa akadaro. Ikoku kunotsamwisa Hamani zvikuru. Nokudaro anoita izvi.
Hamani anorevera nhema mambo pamsoro pavaIsraeri. Anoti: 'Vanhu vakaipa vasingatereri mitemo yenyu.' 'Vanofanira kuurawa.' Ahashvheroshi haazivi kuti mudzimai wake Estere muIsraeri. Saka anoterera Hamani, anoita kuti mutemo uitwe parimwe zuva kuti vaIsraeri vose vagourawa.
Apo Mordhekai anonzwa nezvomutemowo, anotsamwa zvikuru. Anotumira shoko kuna Estere: 'Unofanira kuudza mambo, ndokumukumbira kutiponesa.' Kurwisana nomutemo muPersia kundoona mambo kutoti wakokwa. Asi Estere anopinda asina kukokwa. Mambo anomutambanudzirira tsvimbo yake yendarama, kunoreva kuti haafaniri kuurawa. Estere anokokera mambo naHamani kuzvokudya zvakawanda. Ipapo mambo anobvunza Estere chaanoda kwaari. Estere anoti achamuudza kana iye naHamani vachizouya kuzvimwe zvokudya mangwana.
Pazvokudyazvo, Estere anoudza mambo kuti: 'Vanhu vokwangu neni tichaurawa.' Mambo anoshatirwa. Anoti: 'Ndianiko anotsunga kuita chinhu chakadaro?'
Estere anoti: 'Murumeyo, muvengi, ndiHamani uyu akaipa!'
Zvino mambo ashatirwa zvomenemene. Anoraira kuti Hamani aurawe. Pashure pacho, mambo anoita kuti Mordhekai atevedzere musimba bedzi kwaari iye amene. Mordhekai ipapo anotarisira kuti mutemo mutsva unoitwa unobvumira vaIsraeri kurwira upenyu hwavo pazuva ravanofanira kuurawa. Nemhaka yokuti Mordhekai murume anokosha kudaro zvino, vanhu vazhinji vanobetsera vaIsraeri, nokudaro vanoponeswa pavavengi vavo.
Bhuku reBhaibheri raEstere.
Modhekai naEstere ndivanaani?
Nei Mambo Ahashivheroshi achida mudzimai mutsva, uye ndiani waanosarudza?
Hamani ndiani, uye chii chinomugumbura zvikuru?
Mutemo upi unogadzwa, uye Estere anoitei pashure pokunge agamuchira mashoko kubva kuna Modhekai?
Chii chinoitika kuna Hamani, uye chii chinoitika kuna Modhekai?
VaIsraeri vanoponeswa sei pavavengi vavo?
Verenga Estere 2:12-18.
Estere akaratidza sei kukosha kwokukudziridza ‘mudzimu wakanyarara uye munyoro’? (Est. 2:15; 1 Pet. 3:1-5)
Verenga Estere 4:1-17.
Sezvo Estere akapiwa mukana wokuita chiito nokuda kwokunamata kwechokwadi, isu tinopiwa mukana upi nhasi wokuratidza kuzvipira kwedu uye kuvimbika kuna Jehovha? (Est. 4:13, 14; Mat. 5:14-16; 24:14)
Verenga Estere 7:1-6.
Vakawanda pavanhu vaMwari nhasi vakazvipinza sei mungozi yokutambudzwa nenzira yakafanana, sezvakaita Estere? (Est. 7:4; Mat. 10:16-22; 1 Pet. 2:12)